Xog Weyn - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Sida magacaba ka muuqata, Macluumaadka Weyn waxaa loola jeedaa qaddar badan oo macluumaad ah oo la ururiyey muddo ujeeddo gaar ah leh. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan wuxuu noqon karaa macluumaadka isticmaalaha. Kala soocid dheeri ah oo ku saleysan cilmiga bulshada ee isticmaaleyaal badan muddo ayaa lagu magacaabi karaa Xog Weyn. Qadarka xogta ee loo qoondeeyay webka adduunka maalin kasta, fikradaha suurtagalka ah ee laga soo ururin karo macluumaadkan waa kuwo aan laga gudbi karin.
Faa'iidooyinka waqtiga dhabta ah ee ganacsiyada
Iyadoo horumarinta ee internet iyo teknoolajiyada cusub ee kala duwan, xogta weyn iyo adeegsigeeda ayaa markhaati ka ah baahida korodhay. Meheraduhu wakhtiga dheeraadka ah waxay ururiyaan xog xog ah, taas oo marka la lafa gurayo ay muujin karto qeexitaanno ku saabsan isbeddellada macaamilka iyo xidhiidhkooda. Analytics waxay suurtogal ka dhigaysaa in la kaydiyo xogtan oo la habeeyo si loo sii falanqeeyo gunta hoose ee xogta ganacsi. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa la socodka xaaladda hadda jirta ganacsi oo saadaaliya saadaal ku salaysan dhawr indho-indhayn.
Awoodda xogta weyn kuma koobna tirada macluumaadka laga soo ururiyey ilo -wareedyada oo dhan, laakiin sida hufan ee ganacsiyadu u isticmaalaan macluumaadkan marka la falanqeynayo hababka hadda jira iyo hirgelinta mustaqbalka. Sida laga soo xigtay Gartner, in kabadan 75% shirkadaha ayaa qorsheynaya inay maalgashadaan tan. Sidaa darteed, fikraddu ma aha oo kaliya in la falanqeeyo isbeddellada laakiin sidoo kale waa in si dhakhso leh loo falanqeeyo si loo ilaaliyo kartida. Iyada oo la heli karo farsamooyin baaxad leh oo awood badan leh, farshaxanku wuxuu ku jiraa soo saarista macluumaadka la rabo. Doo ku soo beegmaya baaxadda macluumaadka la kaydiyey, faa'iidooyinku waxay noqon karaan kuwo dawaarle ah.
Waxaan at NewGenApps
Si wax looga qabto baahida sii kordhaysa ee Big Data Analytics in ganacsiyadu ka faa'iideysan karaan hawl -maalmeedkooda, kooxdayada NewGenApps waxay xaqiijisaa inaan mar walba horay u sii socono anagoo isku darayna khibrada guriga anagoo kaashanayna hogaamiyayaasha tignoolajiyada oo ay ku jiraan Microsoft iyo Google. In yar oo ka mid ah horumarkayaga isbeddelaya ayaa xoogga saaraya: isku-darka nidaamka dirista is-wax-barashada barashada mashiinka iyo teknolojiyada xogta waaweyn
Qaabka saadaalinta qorshaynta kartida ee la habeeyay Samaynta qaababka farsamo ee ku filan si ay u maareeyaan noocyada kala duwan ee xog ururinta
Dhanka Tech Stack: Hadoop, Spark, Tableau, Microsoft Power BI, QlikView